Ururka Midowga Afrika oo ka hadlay y xuquuqda Aadanaha Somalia
Mogadishu Talaado 11 December 2012 SMC
Waxaa shalay caalamka laga xusay maalinta xuquuqda Aadanaha ayaa Midowga Afrika, waxaana uu shaaciyay inay difaaci doonaan xuquuqda daka Soomaaliyeed.
Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Maxamed Annadif ayaa sheegay in AMISOM ay ka go’an tahay inay difaacaan xuquuqda dadka Soomaaliyeed, isagoo hoosta ka xariiqay inay ka shaqeynayaan sidii deeqaha loo gaarsiin lahaa dadka baahan iyo in colaadaha Soomaaliya lasoo afjaro si ay dadka Soomaaliyeed ugu noolaadaan nabad.
"AMISOM maanta waxay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya sidii lagu sugi lahaa ammaanka deegaannada dalka si ay shacabku ugu noolaadaan nabad iyo xorriyad" ayuu warsaxaafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa Nairobi ku sheegay Annadif.
Sidoo kale, ergaygu wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM ay sameeyaan mararka qaarkood wacyigelinno ku saabsan dhowrista xuquuqda aadanaha, wuxuuna xusay inay ciidamada Soomaalida ay ku boorriyaan dhowrista xuquuqda dadka Soomaaliyeed.
"Tixgelinta xuquuqda aadanaha waa mid saldhig u ah tababarka ciidamadeenna, waxayna ciidamadeennu ku shaqeeyaan xushmeynta sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda bani’aadamnimada dunida" ayuu yiri ergayga.
Dhanka kale ergayga ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ay kala shaqeynayaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed sidii amaanka loo adkeyn lahaa, si looga hortago dilalka loo geysto suxufiyiinta.